Voasambotry ny fokonolona teny Ankatso, omaly maraina, ny lehilahy iray saika hamaky tranona mpianatra. Tao amin’ny R+3, Ankatso II, ilay lehilahy no saika hanao ny asa ratsiny tokony tamin’ny 4 ora maraina. Voasambotr’ireo mpianatra ralehilahy ka niharan’ny hatezeram-bahoaka. Taorian’izay, avotr’ireo mpiambina eny amin’ny CrouA ilay jiolahy ary natolotra ny mpitandro filaminana.
Lehilahy mpamerin-keloka atao hoe Rafily, voasambotry ny polisy ny talata teo, noho ny fivarotana rongony. Tratra tao an-tranony eny Ankadindramamy izy ary mbola nahatrarana fonosana rongony miisa fito sy rarany milanja 3 kg tany aminy. Efa maherin’ny impolo niditra am-ponja ralehilahy noho io rongony io. Olona Antandroy kosa ny fakany ireo zava-mahadomelina ka amidiny indray amin’ny vidiny 500 ka hatramin’ny 1 000 Ar.
Ankoatra izay, lehilahy iray sy vehivavy iray voasambotry ny polisy teny Alakamisy Ambohidratrimo, ny talata teo, noho ny fivarotana rongony. 96 ireo fonosana rongony tratra tany aminy ary amidiny 400 Ar ny fonosana lehibe. Telo volana ny efa nanaovan’izy ireo ny asa ratsy.